........HIGH WAY UP !: ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့သောစာမေးပွဲတစ်ခု
အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော် တော်တော်ကိုပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ ချစ်လှစွာသော ကျွန်တော့်ကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်တော် ၁ နှစ်လောက်တွဲပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူမရဲ့ ချောမောလှပတဲ့ ညီမငယ်လေးပါပဲ။ သူမဟာ အသက်က ၂၂ နှစ်၊ စကပ်တိုတိုကြပ်ကြပ်လေးတွေ အမြဲဝတ်တတ်ပြီး၊ မြင်တာနဲ့တင် ရင်ခုန်စရာလေးပေါ့ဗျာ။
တစ်နေ့တော့ ဒီကောင်မလေးက မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေ စစ်ကြည့်ဖို့လာပါဦးလို့ခေါ်ပါလေရောဗျို့။ ရောက်သွားတော့ သူတစ်ရောက်တည်းဗျ။ ပြီးတော့တိုးတိုးလေးကပ်ပြောတယ်-သူမဟာ ကျွန်တော့်အပေါ် အလွန်တရာကိုပဲ ကျနေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှကို မဖြေဖျောက်နိုင်လို့ သူ့အစ်မနဲ့လက်မထက်ခင် တစ်ခါတော့လိုက်လျောပေးပါတဲ့။
ကျွန်တော်တော့ကြက်သေသေပြီး စကားတောင်မပြောနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ ကောင်မလေးက ကျွန်မအပေါ်ထပ်က အခန်းထဲသွားနှင့်မယ်။ ရှင်ဆန္ဒရှိရင် တက်လာခဲ့ပါတဲ့။ အပေါ်ထပ်ကို တစ်လှမ်းချင်းတက်သွားတဲ့ သူမအလှကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်ဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံးကို ကြက်သီးတွေထပြီး အေးစက်လာတာပဲ။ ကျွန်တော် ခဏရပ်နေမိတယ်။ ပြီး တံခါးပေါက်ဘက်ဆီကို တန်းတန်းပဲလျှောက်လာခဲ့တယ်။ တံခါးပေါက်ကိုဖွင့်ပြီး ကျွန်တော့်ကားရှိရာကို အသွား၊ အဲ့ဒီမှာ ကြည့်လိုက်တော့ အပြင်မှာရပ်နေကြတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိန်းမမိသားစုဝင်တွေဟာ လက်ခုပ်တီးကာ ကြိုဆိုနေကြပါတော့တယ်။ မျက်ရည်တွေကျနေတဲ့ သူ့အဖေက ကျွန်တော့်ကို ဖက်ပြီး တကယ်ဝမ်းသာတယ်ကွာ မင်းဟာတို့စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်သွားနိုင်တယ်။ ငါ့သမီးအတွက် တကယ့်ယောက်ျားကောင်းပါပဲကွာ။ တို့မိသားစုက မင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်ကွာတဲ့။ ဒီကနေကျွန်တော်ဘာသင်ခန်းစာရသလဲဆိုတော့ “သင်ရဲ့ကွန်ဒုံးကို အမြဲကားထဲမှာပဲထားပါ” ဆိုတာပါပဲ။
Hla Win May Oo July 20, 2013 at 9:32 AM
Whataluck! Whatalesson! :D